BTS အဖွဲ့ဝင် Jimin နှင့် V ဘွဲ့လွန်ကျောင်းတက်‌ရောက်...၇ယောက်ထဲမှ ၆ယောက်က ဘွဲ့လွန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းထဲ တက်ကြသည် - 빵야뉴스
최종편집 : 2021-01-25 19:24 (월)
BL드라마 ‘컬러 러쉬’ 21일 퍼펙트 피날레
엑소 디오 오늘(25일) 미복귀 전역
에픽하이, 뉴욕 타임스퀘어 메인 전광판 장식
현아 더블유 2월호에 등장
OH MY GIRL Harpers Bazaar ဓာတ်ပုံတွင် ဆွဲဆောင်မှု ပြည့်ဝနေသည်
Netflix က၏ BUSTED Season3ကို 22 ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်!
U Know Yunhoသည် 'NOIR'ဖြင့် ၂၀ ရက်တွင် On-tact cameback showcase 'U-KNOW SHOW'ကျင်းပခဲ့သည်
BTS အဖွဲ့ဝင် Jimin နှင့် V ဘွဲ့လွန်ကျောင်းတက်‌ရောက်...၇ယောက်ထဲမှ ၆ယောက်က ဘွဲ့လွန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းထဲ တက်ကြသည်
승인 2020.07.09 16:35
[BBANGYA News | သတင်းထောက် Kyung-soo Park] BTS အဖွဲ့ဝင် ၆ယောက်က ဘွဲ့လွန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းထဲရဲ့ senior junior ဖြစ်သွားကြသည်။
BTS ၏ Big Hit Entertainmentက “RM, Sugar နှင့် J-Hope တို့သည် လွန်ခဲ့သောမတ်လက Hanyang Cyberတက္ကသိုလ်တွင် ကြော်ငြာမီဒီယာ MBA မေဂျာအတန်းကို တက်နေပြီး "Jimin, Vသည် ၉လပိုင်း Hanyang Cyberတက္ကသိုလ်ကို တက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။
အေဂျင်စီ၏အဆိုအရ Jin သည် Hanyang Cyberတက္ကသိုလ်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စတင်တက်နေပါသည်။
အချို့သောသူများသည် စစ်မှုထမ်းခြင်း တရား၀င်နောက်ဆုံးဝင်ရန် လက်ခံနိုင်သည့်အသက် (၂၈ နှစ်)အထိ ဆိုင်းငံ့ထားရန် ကျောင်းဝင်တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုသော အမြင်များရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်စစ်မှုထမ်းခြင်းအက်ဥပဒေအောက်တွင် ဘွဲ့လွန်ကျောင်းကို တက်နေပါက အသက် ၂၈ နှစ်အထိ စစ်မှုထမ်းခြင်းရွှေ့ဆိုင်းရန် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဒီအတောအတွင်း နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များသည် ဤနည်းလမ်းဖြင့် စစ်မှုထမ်းခြင်းရွှေ့ဆိုင်းပြီးနောက် စစ်မှုထမ်းခဲ့ကြသည်။
သို့သော်ထိုနောက်တွင် ထပ်ပြီး ရွှေ့ဆိုင်းလို့မရပါ။ စစ်တပ်အင်အားစီမံခန့်ခွဲမှုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်အသက် ၂၈ နှစ်ကျော်ပြီးသောစစ်မှုထမ်းခြင်းမှဘွဲ့လွန်ကျောင်းဝင်ခွင့်၊ ဒေသနှင့်ကာလအတွက်ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းရန်လျှောက်ထားခြင်းကိုတားဆီးရန် ၂၀၁၈ ခုနှစ်စစ်မှုထမ်းခြင်းအက်ဥပဒေကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ စစ်မှုထမ်းခြင်းအက်ဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုမီ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းတက်ခြင်းကဲ့သို့သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်အသက် ၃၀ အထိ စစ်မှုထမ်းခြင်းရွှေ့ဆိုင်းရန် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
BTS တွင် ယခုနှစ် အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သောအစ်ကိုအကြီးဆုံး Jin သည် ယခုနှစ် စစ်မှုထမ်းရတော့မည်ဖြစ်သည်။
Jin သည် ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကျင်းပခဲ့သော BTS ၏ (၄) ကြိမ်မြောက်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော MAP OF THE SOUL:7ကိုဂုဏ်ပြုရန်အတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် စစ်မှုထမ်းမည့်အကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သူက "ဒီစစ်မှုထမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအများစုကစိတ်ဝင်စားနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဆုံးဖြတ်ချက် ကျလာတာတော့ မရှိသေးဘူး။" "စစ်မှုထမ်းတာဟာတာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် နိုင်ငံကခေါ်လာရင် ဘယ်အချိန်မဆို သွားဖို့ အသင့်ပဲ"လို့ ပြောခဲ့သည်။
Suga က ၁၉၉၃ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး RM နှင့် J-Hope တို့ကို ၁၉၉၄ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး Jimin နှင့် V ကို ၁၉၉၅ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး အငယ်ဆုံး Jungkook ကို ၁၉၉၇ တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
##BTS ##Jimin ##V
'BTS Edition Galaxy S20 ဖြင့် set' Samsung, Limited edition Galaxy Buzz Plus ကို ထုတ်ဖော် ပြသခဲ့သည်
သြဂုတ်လ (၁၀) ရက်နေ့တွင် သရုပ်ဆောင် Park Bo-gum မှ ပရိသတ်များ အတွက် သီချင်း “ All My Love” ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
BTS, Baskin Robbins မော်ဒယ်လ် ဖြစ်သွားပါပြီ...Collaboration ထုတ်ကုန်များကိုလည်း မိတ်ဆက်သွားဦးမည်။
V, ကိုယ်တိုင်ရေးထားသော သီချင်း၏ အပိုင်းအချို့ကို တင်ပြီးဖျက်လိုက်သည်... Mixtape သီချင်း ဖြစ်မလား
BTS သီချင်း ‘Your Eyes Tell’၊ ဂျပန်ရုပ်ရှင် OSTအဖြစ်ပါဝင်မည်။
K-pop boyband SPECTRUM သည်အေဂျင်စီနှင့် စာချုပ်ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်
Kang Daniel ပထမဦးဆုံး အွန်လိုင်းပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲ DAN1TYST ကို ကျင်းပခဲ့သည်
ထုတ်လုပ်သူ MZMC သည် SM အား သူ၏သီချင်းများအသုံးပြုခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်
BoA၏ ၂၀နှစ်မြောက် debut နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင် BoA ၏ Atlantis Princess ကို cover သီချင်းဆိုမည့် BOL4
JBJ95 ၏ retro-themed performance ကို 'RETRO: 95' တွင်ပြသမည်
1 오마이걸 (OH MY GIRL) 하퍼스 바자 화보 매력 발산
2 이종석 컴백, 화보에 담긴 미모
3 iKON BOBBY 3년 만에 솔로 컴백
4 JACKSON, JYP를 떠나 TEAM WANG으로 Fashion Icon의 활동
5 원진아X로운 ‘선배, 그 립스틱 바르지 마요’ 18일 첫 방
6 BBANGYA TV 2021BMF 시작으로 온라인 생중계 영역에 확장
7 넷플릭스 범인은 바로 너! 시즌3 오는 22일 공개!
8 유노윤호 '누아르'로 컴백 20일 온택트 쇼케이스 '유노쇼'(U-KNOW SHOW) 개최